Dowlada Ingiriiska oo si dadban u taageertay Jubbaland State - SomaliNet Forums
Dowlada Ingiriiska oo si dadban u taageertay Jubbaland State
Postby MarsinQorahay » Fri May 24, 2013 5:43 am
Dowlada Ingiriska oo dhawanahaan kaalin muqata ka qadanaysay arimaha Somalia ayaa waxaay marki ugu horaysay ka hadashay mowqifkeeda ku adan arimaha Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo.
Wasiirka Arimaha Afrika ee dowladda Britain, Mark Simmonds, ayaa shalay si toosa uga jawaabay su’aalo u furnaa in qofkii doonaa weydiiyo barta twitter.
Wasiirka oo isla markaana ah mudane Baarlamaanka UK katirsan ayaa qiyaastii 45 su,aalo uga jawabay barta twitter ayado su,alahaasi ay kaalin muuqata uga jirta arimaha maamul usameynta jubboyinka iyo gedo.
Su,aashi ugu cuslayd ee Wasiirka la waydiyo ayaa ahayd Sidan,
Kenya waxay wiiqeysaa dowladda Soomaaliya iyo dadaalka Britain ee ah in la xasiliyo Soomaaliya Waa maxay mowqifka UK ee Jubbaland ?
Wasiirka Arimaha Afrika ee dowladda Britain, Mark Simmonds waxaa uu ku jawabay Gobolku wuxuu xuddun u yahay ammaanka iyo xasilloonida Soomaalia. In xal laga gaaro UK waxay kala shaqeyneysaa dhammaan dhinacyada ay ka mid tahay Kenya.
Jawaabta Wasiirka Arimaha Afrika ee dowladda Britain, Mark Simmonds ayaa waxaay tahay mid si dad ban logu taageraayo Dadaalada Maamul usameynta Jubboyinka iyo gedo oo ay kaalin muqata ka qadanayaan dadka daga 3 dan gobol iyo Dowlada Kenya oo dhanka farsamada ka taageraysa.
Wadamada Reer Galbeedka ee ay ugu horeeyaan wadamada Faransiiska , Norway , Ingiriska iyo Wadanka Japan ee dhaca qarada asia ayaa waxaay si weyn u tagersan yihiin baahinta nidamka fadaralka Somalia iyo dhismaha Maamul Goboleedka Jubbaland State.
http://kismaayo24.com/ GUUL DAROOD GEERI HAWIYE!
Re: Dowlada Ingiriiska oo si dadban u taageertay Jubbaland S
Postby Magnusomalius » Fri May 24, 2013 10:46 am
by Qaarxiye » Sun Jan 07, 2007 8:34 pm » in General - General Discussions
Tue Jan 09, 2007 12:28 am
by Sadaam_Mariixmaan » Sun Jun 24, 2007 5:15 pm » in Provinces - Jubada Hoose
by The_Patriot » Sun Dec 09, 2012 8:36 am » in Ogaden - General Discussions
by Sadaam_Mariixmaan » Wed Apr 25, 2007 8:13 pm » in General - General Discussions
Thu Apr 26, 2007 3:53 am
CLAINS JUBBALAND STATE!!!!!!
by ugaasle » Sat Aug 07, 2010 6:40 am » in Provinces - Gedo